Mety ve ny Mitahiry Basy Hiarovan-tena?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (Afovoany) Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Mety ve raha manana basy ny Kristianina mba hiarovany ny tenany amin’ny olon-kafa?
Afaka manao izay azony atao mba hiarovana ny tenany ny Kristianina, nefa mila manaraka ny toro lalan’ny Baiboly foana. Hita amin’ireny toro lalana ireny fa tsy mety ny mampiasa basy mba hiarovan-tena amin’ny olon-kafa, na inona na inona karazan’ilay basy. Diniho, ohatra, ireto toro lalana ireto:
Masina ny aina amin’i Jehovah, indrindra fa ny ain’ny olona. Nilaza i Davida mpanao salamo fa i Jehovah no “loharanon’aina.” (Sal. 36:9) Raha manao zavatra mba hiarovana ny tenany na ny fananany àry ny Kristianina iray, dia hiezaka mafy araka izay azony atao izy mba tsy hamono olona ka hanana trosan-dra.—Deot. 22:8; Sal. 51:14.
Marina fa mety hahatonga ny olona iray hanana trosan-dra izay rehetra ampiasainy mba hiarovan-tena. Mora mahafaty olona anefa ianao raha manana basy, na fanahy inianao izany na tsia. * Mety ho efa taitaitra be koa ilay mpanafika, ka raha hitany hoe manana basy ianao, dia vao mainka mety hampidi-doza ny zavatra hitranga ary mety hisy ho faty mihitsy.
Nasain’i Jesosy nitondra sabatra ny mpianany ny alina farany talohan’ny nahafatesany. Tsy hoe mba hiarovan’izy ireo ny tenany akory no anton’izany. (Lioka 22:36, 38) Te hampianatra azy ireo kosa izy hoe tsy tokony hahery setra izy ireo, na dia misy olona maromaro mitondra fitaovam-piadiana aza manafika azy ireo. (Lioka 22:52) Rehefa nasian’i Petera tamin’ny sabany ny mpanompon’ny mpisoronabe, dia notenenin’i Jesosy izy hoe: “Avereno amin’ny tranony ny sabatrao.” Nilaza toro lalana ho an’ny Kristianina tamin’izany sy amin’izao izy avy eo. Hoy izy: “Ho fatin’ny sabatra izay rehetra mampiasa sabatra.”—Mat. 26:51, 52.
Mankatò an’izay lazain’ny Mika 4:3 ny vahoakan’Andriamanitra, ka ‘manefy ny sabany ho angadinomby, ary ny lefony ho antsy fandrantsanam-boaloboka.’ Tia fihavanana ny tena Kristianina. Manaraka an’ity torohevitra nasain’Andriamanitra nosoratan’ny apostoly Paoly ity izy ireo: “Aza mamaly ratsy ny ratsy, na amin’iza na amin’iza. ... Raha azo atao, ka mbola miankina aminareo koa, dia mihavàna amin’ny olona rehetra.” (Rom. 12:17, 18) Nampihatra an’izany foana i Paoly, na dia niatrika olana maro aza. “Saika nahita loza tamin’ny jiolahy”, ohatra, izy. Tsy nandika ny toro lalan’ny Baiboly mihitsy anefa izy mba hiarovana ny ainy. (2 Kor. 11:26) Natoky an’i Jehovah kosa izy, sady natoky hoe tsara kokoa noho ny “fitaovam-piadiana” ny torohevitra ao amin’ny Baiboly.—Mpito. 9:18.
Ny aina no zava-dehibe kokoa noho ny fananana, amin’ny Kristianina. “Tsy miankina amin’ny zavatra [ananan’ny olona] ny ainy.” (Lioka 12:15) Ahoana àry raha misy olona mitondra basy manafika antsika? Ahoana raha efa miezaka ny ho tsara fanahy aminy isika fa tsy miraharaha izy? Ny toro lalana avy amin’ity tenin’i Jesosy ity no arahintsika: “Aza manohitra an’izay manisy ratsy anao.” Mety hidika mihitsy aza izany hoe avelantsika halainy daholo izay rehetra tadiaviny, ka toy ny hoe omentsika azy ny akanjontsika anatiny sy ivelany. (Mat. 5:39, 40; Lioka 6:29) * Tsara kokoa anefa ny mitandrina. Mety tsy hanintona mpangalatra, ohatra, isika raha tsy ‘mampideradera fananana.’ (1 Jaona 2:16) Mety ho voaro koa isika raha fantatry ny mpiara-monina amintsika hoe Vavolombelon’i Jehovah ary malaza hoe tia fihavanana.—Ohab. 18:10.
Mitandrina mba tsy hanafintohina olona ny Kristianina. (Rom. 14:21) Mety ho gaga be ny mpiara-manompo sasany raha fantany hoe mitahiry basy ny Kristianina iray mba hiarovan-tena amin’ny olon-kafa. Mety ho tafintohina mihitsy aza izy ireo. Tiantsika anefa ny mpiara-manompo amintsika, ka izay hahasoa azy ireo no tadiavintsika aloha izay vao ny hahasoa antsika. Koa na atao aza hoe tsy raran’ny lalàna ny manana basy, dia tsy hampaninona antsika ny hampandefitra ny zontsika.—1 Kor. 10:32, 33; 13:4, 5.
Miezaka mafy mba ho ohatra tsara ny Kristianina. (2 Kor. 4:2; 1 Pet. 5:2, 3) Homen’ny anti-panahy torohevitra ny Kristianina iray, raha manana basy mba hiarovany ny tenany amin’ny olon-kafa. Tsy ohatra tsara izy raha mbola mitahiry an’ilay izy ihany aorian’izay. Tsy hahafeno fepetra hahazo andraikitra na tombontsoa manokana eo anivon’ny fiangonana àry izy. Hoatr’izany koa no toromarika harahina, raha mbola manao asa mitaky ny hitondrany basy ny Kristianina iray. Tsara kokoa raha mitady asa hafa izy. *
Anjaran’ny Kristianina tsirairay ny manapa-kevitra hoe ahoana no hiarovany ny tenany sy ny fianakaviany ary ny fananany. Anjarany koa ny misafidy izay asa hataony. Tokony hanaraka ny toro lalan’ny Baiboly anefa izy rehefa misafidy. Tena hendry sy be fitiavana mantsy i Jehovah matoa nanome antsika an’ireny toro lalana ireny. Misafidy ny tsy hanana basy mba hiarovan-tena amin’ny olon-kafa àry ny Kristianina mifandray tsara amin’i Jehovah. Fantany fa raha matoky an’i Jehovah izy ary mampihatra ny toro lalan’ny Baiboly, dia hifandray tsara aminy foana ka ho azo antoka hoe hiaina mandrakizay sy tsy hanana ahiahy intsony.—Sal. 97:10; Ohab. 1:33; 2:6, 7.
Hiantehitra amin’i Jehovah ny Kristianina amin’ny fahoriana lehibe, fa tsy hiaro tena
^ feh. 3 Mety ho te hanana basy ny Kristianina iray mba hihazana biby hatao sakafo na hiarovan-tena amin’ny bibidia. Rehefa tsy ampiasaina anefa ilay izy, dia tsara kokoa raha tsy asiana bala na angamba ravana mihitsy. Tokony hampirimina tsara any amin’ny toerana mihidy lakile ilay izy avy eo. Raha raran’ny fanjakana ny manana basy, na misy lalàna hafa apetrany momba ny basy, dia mankatò ny Kristianina.—Rom. 13:1.
^ feh. 2 Misy lahatsoratra manazava an’izay azo atao mba hiarovan-tena amin’ny mpanolana, ao amin’ny Mifohaza! (frantsay) 8 Martsa 1993, pejy 6-8, sy ny Manontany ny Tanora—Torohevitra Mahasoa, Boky 1, toko 32.
^ feh. 4 Hazavaina bebe kokoa ao amin’ireto gazety ireto ny fiheveran’ny Kristianina ny asa mitaky ny hitondrany fitaovam-piadiana: Ny Tilikambo Fiambenana 1 Novambra 2005, pejy 31, sy ny 15 Janoary 1984, pejy 21-22, fehintsoratra 17-19.